FAZASOMA – AMBOSITRA : Manohana ireo zaza solafaka eo amin’ny fiainana sy ireo be antitra
Tato ho ato dia voaresaka matetika ny fampanajana ny zo ho an’ny sokajin’olona rehetra tsy an-kanavaka. 12 février 2018
Maro ireo efa mahalala sy mandre izany, saingy tsy vitsy ihany koa ireo mbola minia mandika izany zon’olombelona izany any amin’ny sehatra maro samihafa. Eo anatrehan’izany dia misy ireo fikambanana tsy miankina izay mijoro manohana ireo olona heverina ho tsy misy mpijery na hatao ankilabao eny anivon’ny fiarahamonina. Tafiditra ao anatin’izany indrindra ny fikambanana Fazasoma na ny fanarenana ireo zaza solafaka eto Madagasikara.
Antom-pisian’ity farany tany am-piandohana ny fijerena ireo zaza tsy ampy taona teny anivon’ny fonja, araka ny fantatra. Amin’izao fotoana izao kosa izy ireo dia efa misehatra amin’ny sokajin’olona hafa, isan’izany ny fijerena manokana ireo zokiolona. Araka ny fantatra mantsy izao dia efa mahatratra 40 ireo be antitra taizana ao amin’ny toby Ampitemby, izay eo ambany fanohanan’ny Fazasoma. Etsy ankilan’izay dia miisa 35 ireo ankizy tena sahirana omena sakafo na “cantine scolaire” izay nanomboka tamin’ity taona ity.
Raha ny fanampim-panazavana voaray hatrany dia ireo zaza tsy misy mpiahy, tsy misy ray aman-dreny, tsy misy ray, nefa hita ho mbola tokony hamporisihana hianatra no tafiditra ao anatin’ireo tohanana. Tanjon’ny Fazasoma amin’ny ankapobeny ny hanaovana asa fanasoavana ho an’ny mpiara-belona. Araka ny fanazavana mantsy dia tokony hisitraka ny zony avy ny sokajin’olona rehetra. Raha ny fantatra dia tsy miasa irery izy ireo amin’ny asa fa misy ireo mpiara-miombon’antoka avy any ivelany manohana azy ireo amin’izany.
Tafiditra ao anatin’izany Père André Marie izay niara-niasa tamin’ny Fazasoma tao anatin’ny taona maro. Toy ny efa fanao isan-taona dia nanatanteraka hetsika fifampiarahabana nahatratra ny taona ity fikambanana ity tamin’ny herinandro lasa teo.